ऊर्जा क्षेत्रलाई मौद्रिक नीति आकाशकाे तारा : ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान
प्रकाशित : 6:08 pm, शुक्रबार, साउन २, २०७७
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति उर्जा क्षेत्रको लागि उत्साहजनक छैन । काँडामा हिँडिरहेको र खुट्टाबाट रगत बगिरहेको समयमा आकाशको तारा देखाइदिएको जस्तै कुरा मौद्रिक नीतिमा आएको छ । अब आकाशको तारा हेरेर खुट्टाको घाउ कसरी निको हुन्छ ?
अहिले उर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको व्याजदर हो । व्याजदरको समस्या सम्बोधन भएको छैन । ५ प्रतिशत व्याजमा कर्जा चुक्ता नभएसम्म ऋण दिने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । बरु त्यतिबेलासम्म लाभांश लान नपाइने भनेको भए हुन्थ्यो । यसले धेरै थला परेका उद्योगहरु उठ्ने संभावना हुन्थ्यो । त्यसमा मौद्रिक नीति मौन छ ।
दोस्रो १० प्रतिशत लगानी उर्जामा गर्नुपर्ने भनेको छ । तर, सबै बैंकको १० प्रतिशत लगानी उर्जामा पुगिसकेको अवस्था छ । यसको मतलब अब यो क्षेत्रमा लगानी थप्नु पर्ने अवस्था छैन भन्ने विषयमा छलफल गराउने अवस्था सृजना भएको छ ।
उर्जाको निर्यातमा छुट दिइएको छ । तर, निजी क्षेत्रले निर्यात नै गर्न पाउँदैन । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई त यो सुबिधाको के आवश्यकता छ र ? यो त सरकारले सरकारलाई नै सुबिधा दिएको जस्तो भयो ।
एकातिर हामी ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट बिजुली बनाउने भन्छौं । तर, १० मेगावाटको लागि मात्र फाइनान्सिङ व्यवस्था गर्छौं । यहाँ कुरा मिलेको छैन ।
तेस्रो, उर्जाको निर्यातमा छुट दिइएको छ । तर, निजी क्षेत्रले निर्यात नै गर्न पाउँदैन । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई त यो सुबिधाको के आवश्यकता छ र ? यो त सरकारले सरकारलाई नै सुबिधा दिएको जस्तो भयो ।
चौथो, स्टोरेजलाई (जलाशय) छुट दिएको छ । अहिलेको निजी क्षेत्रको ९५ प्रतिशत लाइसेन्स ‘रन अफ द रिभर’को छ । यसले ९५ प्रतिशतले केही सुबिधा नपाउने र ५ प्रतिशतले मात्र पाउने अवस्था बन्छ । यो पनि केही फाइदाजनक भएन ।
यो मौद्रिक नीतिले उर्जा क्षेत्रलाई गरेको एउटा राम्रो काम भनेको नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले प्रशारण लाइन नबनाइदिएर डुबेका उद्योगहरुले केही राहत पाउने कुरा छ । तर, अहिले धेरै ठाउँहरुमा प्रशारण लाइन बनिसकेको अवस्था छ । यो नीति ५ वर्ष पहिला आएको भए त धेरै नै प्रभावकारी हुन्थ्यो ।
अबका आइपिओ सेयरमा सर्वसाधारणले लगानी गर्दैनन्
अब जलबिद्युत कम्पनीहरुको आइपिओमा सर्वसाधारणले लगानी गर्दैनन् । बुटवल पावरको सेयर नबिकेर एनएमबी बैंक आफैंले किन्नुपर्ने अवस्था आयो । बुटवल पावर कम्पनीको समेत एफपिओ बिक्री भएन ।
यो क्षेत्रबाट मानिसहरुको विश्वास उठिसकेको कुरा त सेयर बजारले पुष्टि गरेकै छ । फाइनान्सियल क्लोजर हुनै छाडिसकेका छन् ।
(उर्जा विज्ञ प्रधानसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
« कृषि, ऊर्जा र साना व्यवसायमा उदार मौद्रिक नीति
सेयर किन्न इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ९.९९ प्रतिशत ब्याजदरमै ऋण दिने »